March 2010 - Knowledge is Free
Size: 14 MB (Rapidshare+Hotfile)
A technical director foraUK-based computer company who teaches such courses as Caring for Your PC has developed prescriptions for treating sick PCs। Arguing the benefits of fixing it yourself rather than relying on experts, his mission is to empower users with trouble- shooting and safe repair skills. Coverage includes PC anatomy, tips for getting the most out of tech support, and finding help on the Internet. Appendices includeaglossary, resources, repair tools, and common file extensions.
McGraw-Hill | English | ISBN: 0072255536 | 480 pages | File type: PDF | 138 MB
Posted by kmo at 1:47 AM No comments:
Labels: E-books, Hardwares
Extreme tech: Hacking Google Map and Google Earth PDF | English | 10MB
Posted by kmo at 12:04 AM No comments:
CreateaWatercolor-Themed Website
Grunge Poster with 3D Typography
Posted by kmo at 11:51 PM No comments:
Labels: Designs, E-books
40 Beautiful Vector Art Flowers Wallpapers | 40 JPGE | 17 MB
Posted by kmo at 8:43 AM No comments:
250 expert hints to boots Windows XP
And 450 more PC tricks inside!
123 Pages | PDF | English | 12 Mb
Plus! Over 50 essential keyboard shortcuts
Posted by kmo at 11:39 AM No comments:
Labels: E-books, Windows XP
Getting StartED with Windows7assumes no previous knowledge of Windows, so is perfect for those using Windows for the first time, or switching from another operating system. What you will learn-
Posted by kmo at 11:02 AM No comments:
Labels: E-books, Windows 7
Publisher: New Riders Press 2006| 472 Pages| ISBN: 0321316274 |PDF |55 MB
Rapidshare Link :-
Posted by kmo at 11:21 PM No comments:
Course Technology PTR | ISBN 159200363X | 2004 | 264 Pages | PDF | English | 12 Mb
Through twenty stunning, full-color artistic projects and clear step-by-step explanations how to complete them, "Adobe Photoshop CS Type Effects" will help you master the advanced type effect techniques of Photoshop CS. Use Photoshop CS to applyavariety of effects to your text, includingaspiral effect foraCD,atiled mosaic effect, andaunique magnifying glass effect. All of the original artwork that you need to complete your magnifying projects is included on the book?s CD- ROM.
Model: HP Mini 110-1124TU အတွက် USB Flash Drive နဲ့ Windows XP Service Pack3တင်နည်းလေးကို လက်တွေ့ စမ်းသပ်ကြည့်ပါမယ်။ Memory Stick ဖြင့် Windows တင်ရန်အတွက် မိမိရဲ့ Stick ကို Bootable Stick တစ်ခုဖြစ်အောင် ပြင်ဆင်ပေးထားရပါမယ်။ ဒါကြောင့် ဦးစွာပထမ-
(1) WinSetupFromUSB ရဲ့ Version 0.2.3 ကို Downlaod လုပ်ထားလိုက်ပါမယ်။
(2) ရရှိလာတဲ့ Program ကို ကွန်ပျူတာမှာ install လုပ်လိုက်ပါ့မယ်။ ဒါဆိုရင် အောက်ပါပုံစံအတိုင်း မြင်တွေ့ ရမှာဖြစ်ပါတယ်။
(3) WinSetupFromUSB ကို အသုံးပြုရန်အတွက် Microsoft ရဲ့ .net Framework ကို install လုပ်ထားဖို့ လိုအပ်ပြန်ပါတယ်။
အမှတ်စဉ်(၁)အရ Windows XP SP3 တင်လိုတဲ့ Windows အခွေကို ကွန်ပျူတာရဲ့အတွင်းမှာ Folder တစ်ခု တည်ဆောက်ပေးပြီး ကြိုတင်ထည့်ထားရပါမယ်။ ပြီးတော့ Browse ကို Click နှိပ်ပြီး copy ကူးထားတဲ့ windows ဖိုင် ထားရှိတဲ့ Location ကို ညွှန်းပေးရပါမယ်။
အမှတ်စဉ်(၂)အရ Windows တင်ရာတွင် အသုံးပြုမယ့် Memory Stick ကို ကွန်ပျူတာရဲ့ USB အပေါက်မှာ တပ်ထားပေးရပါမယ်။ ပြီးတော့ Refresh ကို Click တစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပေးပါ။ ဒါဆိုရင် မိမိတင်ဆင်လိုက်တဲ့ Memory Stick ရဲ့ အမျိုးအမည် တစ်ခုပေါ်လာပါမယ်။
အမှတ်စဉ် (၃) အရ မိမိအသုံးပြုတော့မယ့် Memory Stick ဟာ format ချထားပေမယ့် NTFS format မဖြစ် သေးဘူးဆိုရင် HP Format Tool ကို အသုံးပြုပြီး NFFS File system ဖြစ်သွားအောင် Format ချပေးလိုက်ပါ။
အမှတ်စဉ် (၄) အရ အားလုံးပြောင်းပြီးပြီဆိုရင်တော့ Go ကို click တစ်ချက်နှိပ်ပေးလိုက်ပါ။
ဒါဆိုရင် Windows တင်နိုင်တဲ့ Memory Stick လေးတစ်ခု ပိုင်ဆိုင်သွားပြီပေါ့။
(4) လုပ်ဆောင်ရန် ကျန်ရှိသည့်အပိုင်းကတော့-
(၁) Windows တင်လိုတဲ့ ကွန်ပျူတာရဲ့ USB Port မှာ စောစောက Memory Stick လေးကို တပ်ပေးလိုက်ပါ။
(၂) ကွန်ပျူတာရဲ့ Power button ကို နှိပ်၍ ကွန်ပျူတာကို ဖွင့်လိုက်ပါ။
(၃) ညွှန်ကြားချက်အတိုင်း Bios Setup ထဲသို့ ၀င်ရောက်နိုင်ရန်အတွက် F10 Key ကို နှိပ်လိုက်ပါ။ ဒါဆိုရင် HP Mini 110 ရဲ့ Bios Setup Option ထဲကို ရောက်ရှိသွား ပါမယ်။
(4) Bios ရဲ့ System Configuration အတွင်းက Boot Options ထဲကို Enter Key နှိပ်၍ ၀င်လိုက်ပါ။
(5) အဲဒီမှာ 1st Boot Device ဆိုတဲ့နေရာမှ မိမိရဲ့ USB Device သို့ ပြောင်းပေးလိုက်ပါ။ ပြီးပြီဆိုရင်- Keyboard မှ Esc Key ကို နှစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါ။ ထပ်မံပြီး F10 Key ကို နှိပ်၍ Configuration ကို Save and exit လုပ်ရပါမယ်။ Yes ပေါ်တွင် highlight ဖြစ်နေသည့်အတိုင်း Enter ကို နှိပ်၍ ပြန်ထွက်လိုက်ပါမယ်။
ဒါဆိုရင် Windows တင်နိုင်ရန် ကျန်ရှိသည့် step များကတော့ လွယ်သွားပြီပေါ့။ ညွှန်ကြားချက်များအတိုင်း တစ်ဆင့်ချင်းဆီ ဆက်လက်၍ လုပ်ဆောင်သွားပါ။
ဒါဆိုရင် Memory Stick ကို အသုံးပြုပြီး CD/DVD Drive မလိုပဲ Windows XP Service Pack3တင်ပုံ တင်နည်းလေးကို နားလည်သဘောပေါက်သွားပြီလို့ ယုံကြည်ပါတယ်။ အဆင်ပြေပါစေဗျား။
Posted by kmo at 2:50 PM 1 comment:
Posted by kmo at 1:51 PM No comments:
Photoshop Tutorials: How To Convert Pictures To Vectors
PDF + PSD | 5.23 MB | 30 Pages
Posted by kmo at 12:39 PM No comments:
Posted by kmo at 12:20 AM No comments:
Adobe Illustrator CS3 Classroom inaBook Publisher: Adobe Press | ISBN: 0321492005 | edition 2007 | CHM | 488 pages | 38,2 mb
Adobe Illustrator သည် လုပ်ငန်းသုံးအဆင့် စံနှုန်းမီသရုပ်ဖော်ပုံ ရေးဆွဲရေး ပရိုဂရမ်ဖြစ်သည်။ ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေရေး၊ မာလ်တီမီဒီယာနှင့် အွန်လိုင်းအတွက် ဂရပ်ဖစ်ပုံများ ရေးဆွဲပေးနိုင်သည်။ ဒီဇိုင်နာ တစ်ယောက်အတွက် ဖြစ်စေ၊ ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေရေးအတွက် artwork ရေးဆွဲပေးသော နည်းပညာဆိုင်ရာ သရုပ်ဖော်ပုံ ရေးဆွဲသူအတွက်ဖြစ်စေ၊ မာလ်တီမီဒီယာဂရပ်ဖစ် အတွက် ရေးဆွဲပေးသော ပန်းချီဆရာ အတွက်ဖြစ်စေ၊ web စာမျက်နှာနှင့် online အကြောင်းအရာများ ဖန်တီးသူအတွက်ဖြစ်စေ Adobe Illustrator က ပရော်ဖက်ရှင်နယ် အရည်အသွေးမီ ရလဒ်အတွက် လိုအပ်မည့် ကိရိယာတန်ဆာ ပလာများ ပေးကမ်းထားသည်။Adobe Illustrator CS3 Classroom inabook သည် Adobe System, Inc. မှ Adobe ဂရပ်ဖစ်နှင့် ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေရေး ဆော့ဖ်ဝဲများအတွက် တရားဝင်လေ့ကျင့်သင်ကြားရေး စာအုပ်တွဲ စီးရီးမှ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်သည်။ သင်ခန်းစာများကို သင့်ကိုယ်ပိုင်ခြေလှမ်းအစိတ်အကျဲအတိုင်း သင်ယူနိုင် ရန် ဒီဇိုင်းပြုထားသည်။ သင့်အတွက် Adobe Illustrator သည် အသစ်ဖြစ်နေပါက ပရိုဂရမ် လုပ်ဆောင်ရန် ကျွမ်းကျင်ပိုင်နိုင်ဖို့အတွက် လိုအပ်သော အခြေခံများ သင်ယူရမည်။ သင်သည် အတွေ့ အကြုံရှိ အသုံးပြုသူဖြစ်ပါလျှင် Classroom inaBook က Adobe Illustrator နောက်ဆုံး version အသုံးပြုခြင်းအတွက် tips နှင့် techniques များအပါအ၀င် အဆင့်မြင့် သွင်ပြင် လက္ခဏာရပ်များ များစွာသင်ကြားပေးကြောင်း တွေ့ရှိရပေလိမ့်မည်။
သင်ခန်းစာ တစ်ခုစီသည် သတ်သတ်မှတ်မှတ် ပရောဂျက်တစ်ခု ဖန်တီးဖို့ရာ တစ်ဆင့်ပြီးတစ်ဆင့် ညွှန်ကြားချက်များ ထောက်ပံ့ပေးကမ်းထားသော်လည်း စူးစမ်းလေ့လာရန်နှင့် စမ်းသပ်လုပ်ဆောင်ရန် နေရာပေးထားသည်များ ရှိပါသေးသည်။ သင်သည် ဤစာအုပ်ကို အစမှအဆုံး အစဉ်လိုက် လေ့လာသွား နိုင်သကဲ့သို့ သင်စိတ်ဝင်စားမှုနှင့် လိုအပ်ချက်များဖြင့် သက်ဆိုင်ရာ သင်ခန်းစာများကိုသာ ရွေးချယ်ပြုလုပ် သွားနိုင်သည်။ သင်ခန်းစာတစ်ခုစီတွင် သင်လေ့လာသင်ယူခဲ့သမျှ အနှစ်ချုပ် ပြန်လည်သုံးသပ်ချက်ဖြင့် နိဂုံးချုပ်ထားပါသည်။
Posted by kmo at 3:52 PM No comments:
How to Adding Custom Emoticon to ShoutMix shoutbox?
အထက်ပါ ပုံစံအတိုင်း သက်ဝင်လှုပ်ရှားနေသည့် Emoticon ပုံလေးကို နမူကြည့်နိုင်ပါတယ်။ ShoutMix ရဲ့ Shoutbox များအတွင်း မိမိနှစ်သက်တဲ့ ပုံလေးများကိုလည်း ထပ်မံပြီး ထည့်သွင်းရွေးချယ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ Search Engine များကို အသုံးပြု၍ "free emoticons set" လို့ ရိုက်ထည့်ပြီး ရှာဖွေနိုင်ပါသေးတယ်။ အကယ်၍ သင့်ကိုယ်ပိုင် ဖန်တီးချက်များရှိပါကလည်း Photobucket ကဲ့သို့ image upload site များတွင် အပ်နှံခြင်းဖြင့်လည်း သင့်စိတ်တိုင်းကျ ရုပ်ပုံများကို အသုံးပြု၍ ရနိုင်သည်။ ပြုလုပ်ရန်မှာ-
(၁) ပထမဦးစွာ ShoutMix သို့သွား၍ Account တစ်ခုဖွင့်လိုက်ပါ။
(၂) ထို့နောက် Display အောက်ဘက်ရှိ Smileys ဆိုသည့်နေရာတွင် Click တစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါ။
(၃) Smiley image URL ကို ထည့်ပေးရပါမယ်။ Code နဲ့ (Optional) ထဲတွင် စာဖြည့်ပြီး Select လုပ်ပေးပါ။
(၄) ပြီးနောက် Add ရွေးချယ် click နှိပ်လိုက်ပြီး Save Settings ဖြင့်သိမ်းဆည်းပေးပါမည်။
(၅) ဒါဆိုရင် သင့်စိတ်ကြိုက် Emoticon တွေ ရသွားပြီပေါ့။
Posted by kmo at 9:42 AM No comments: